Tag: saiti marongero | Martech Zone
Tag: saiti marongero
Mwedzi uno paEdge yeWebhu Radio, tiri kufamba nemubhadharo pamatanho ekutaurisa, tichikurukura mashandisiro emashandisirwo, uye nekupa matani emashoko neruzivo. Vashambadzi vanoziva kukosha kunoshamisa uko kunobhadhara pakutsvaga kwekushambadzira kunogona kuwana mukuvaka ruzivo kana iwe usina chiremera chekutsvaga, kutora zvinotungamira, uye kutora vateereri vanokodzera vakagadzirira kutenga kwavo kunotevera. Izvo zvakati, mhinduro yakajairika yatinonzwa pakati pevanyengeri vePPC ndeiyi: Ah, isu takaedza
Chinhu chimwe ndechechokwadi mune ino indasitiri… chero musangano pakati pemagadget geeks unoguma mune mamwe magadhi ari kutengwa! Erin Sparks paakandiudza nezveEcho Smartpen yake, ndakabuda. Erin anomhanyisa Indianapolis SEO yakasimba uye, sesu, anopinda misangano yakati wandei nevatengi. Ini ndiri mumwe wevakomana vakura vasingade kutora zvinyorwa asi vozofanira kukumbira rumwe ruzivo gare gare apo ini ndakakanganwa zvatakataura